Gmail macruufka helo update weyn laakiin dadka isticmaala aadan ku faraxsanayn - Rule News
Gmail macruufka helo update weyn laakiin dadka isticmaala aadan ku faraxsanayn
INTERNET Rafaa Google ayaa sii daayay update weyn ay app Gmail macruufka in ugu dambeyntii keentaa helid asalka macmiilka email ah, laakiin dadka isticmaala ay aadan ku faraxsanayn ku saabsan.
Google ku dhawaaqay update ah on Wednesday, daaha ka qaaday inay Gmail for iPhone iyo iPad hadda ku faantaa feature helid asalka ah, taas oo macnaheedu yahay emails noqon doonaa “pre-soo kaxeeyey” oo diyaar u ah inay u arkaan marka aad furo app.
Injineer software Google Melissa Dominguez ayaa sheegay in post blog a shalay, “Haddii aad tahay hubinta wax ugu horeysay email aad subaxdii ama sida aad sugayso in line at dukaanka raashinka, aad rabto in aad si aad u hesho fariimaha aad sida ugu dhaqsaha badan. Iyada oo update maanta in macruufka Gmail ka App, waa u fududahay in ay kaliya in la sameeyo.”
feature cusub waxay u baahan tahay macruufka 7, iyo dadka isticmaala sidoo kale u baahan doontaa in “asalka helid app” on wareegay. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah ma doonayaan in laga yaabo in dhibaato, sida users of app update ah ayaa si deg deg si ay u tacsiyayn ka badan on dukaanka app ah, iyadoo qaar ka mid ah waxay ku yidhaahdeen in ay waxyeelo ay nolosha batteriga.
Mid ka mid ah user faraxsaneyn Gmail yiri, “update Tani waxa ka mid app asalka u cusboonaysiinta iyo waxa aad si dhakhso ah lagu dilay noloshayda batari. Inta kale ee app weli waa wanaagsan yahay,, laakiin aan u dami helid asalka aan batari aawadiis ah.”
Gmail ee update macruufka sidoo kale waxa ay taageero u saxiixay in guud ahaan Dalka Chine iyo adeegyada kala duwan Gmail macruufka.
“app Gmail ayaa sidoo kale hadda taageertaa saxiixa-in guud ahaan apps Google macruufka, lugu daro Maps, Drive, Youtube iyo Chrome,” Google sharaxay. “Gal si aad mid, oo aad la saxiixay doonaa in dhammaan (this sidoo kale u shaqeeya saxiixa baxay). Sidaas ma aha waa in aad ku qor in password 27-qof ama dib u soo ceshano aad 2-tallaabo code xaqiijinta mar kasta oo aad gasho in app kale Google.”
Si kastaba ha ahaatee, dadka isticmaala aysan ku faraxsaneyn oo arrintan ku saabsan ka mid ah, iyo qaar ka mid ah waxay ku andacoodaan in feature ee aan shaqayn.
“Tan iyo markii aan updated app ah waxa uu mar dambe iigu in aad gashid, waana wax badan oo gaabis ah ka badan ka hor inta update,” mid ka mid user miffed qoray.
article Tani, Gmail macruufka helo update weyn laakiin dadka isticmaala aadan ku faraxsanayn, waxaa syndicated ka weyddiista oo waxaa halkan fasax posted.
20953	0 app Store, Gmail, Google, weyddiista, Macruufka, IPad, iPhone, YouTube
← 10 Xallinta Dabiiciga ah ku ool ah, waayo, Cudurada Wadnaha 'Isbedel No’ xaalad Schumacher →